काठमाडौंबाट पक्राउ परेको यो जोडी, गर्दा रहेछन् यस्तो डरलाग्दो काम ! – Hamro24News
July 6, 2021 adminLeaveaComment on काठमाडौंबाट पक्राउ परेको यो जोडी, गर्दा रहेछन् यस्तो डरलाग्दो काम !
म्याद सकिएको एटीएम कार्ड प्रयोग गरेर ३४ लाख रुपैयाँ निकाल्ने २ जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा सोलुखुम्बु घर भई काठमाडौंको भत्केको पुलमा बस्ने ५७ वर्षीय जगत बहादुर गुरुङ र पर्सा घर भई भत्केको पुल बस्ने ३० वर्षीया सावित्री गुरुङ रहेका छन् ।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिकाले दुई वर्ष मुनिका छोराछोरीलाई छाडेर विदेश जान रोक लगाउने भएको छ । नगरको नर्वौँ अधिवेशनले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्दै दुई वर्ष मुनिका छोराछोरीलाई छाडेर विदेश जान महिलालाई रोक लगाएको हो ।
सभाले बच्चा दुई वर्ष नहुँदै आमा, बुवा, सासु आमा र ससुरालाई जिम्मा लगाएर विदेश जान महिलालाई अनुमति नदिने निर्णयसहित १७ बुँदे महत्वपूर्ण प्रस्ताब पारित गरेको छ ।
दुई वर्ष मुनिका बच्चालाई आमाले छाड्दा उसको सर्वाङ्गीण विकासमा नकारात्मक असर पुग्ने भन्दै नगरपालिकाले छाडेर जान अनुमति नदिने भएको हो ।
स्वास्थ्यका हिसाबले पनि जन्मेको ६ महिनासम्म आमको मात्र दूध खुवाउने र दुई वर्षसम्म आमाको स्तनपान गराउनु राम्रो ठानिन्छ । दुई वर्षसम्म आमाको स्तनपान गरेको बच्चाको शारिरीकर र मानसिक स्वास्थ्य राम्रो हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पारित गर्दै बाल विवाह, सडक मानवमुक्त नगरपालिका घोषणा गर्ने लगायतका प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने पनि पारित गरेको छ ।